မင်္ဂလာပါ Nest မှ smart video video intercom အသစ် Gadget သတင်း
မင်္ဂလာပါ Nest မှ smart video intercom အသစ်
ဟိုဆေး Alfocea | | နေအိမ်အလိုအလျောက်
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကနည်းပညာကုမ္ပဏီ Nest သည်စမတ်အိမ်အသစ်အတွက်အပူထိန်းကိရိယာနှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းကိုအထူးပြုခဲ့သည် အသိုက်လုံခြုံမှု.
သို့သော်လုံခြုံရေးသုံးစနစ်ဖြင့်သုံးကိရိယာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ဘဲအခြားထုတ်ကုန်အသစ်နှစ်မျိုးဖြင့်လည်းပါရှိသည်။ The အပြင်ဘက် Nest Cam IQရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည့်စောင့်ကြည့်ကင်မရာနှင့် ဟလိုနောက်တစ်ခုအကြောင်းပြောမယ့် smart video intercom
အသိုက်မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော်အိမ်မှာလိုချင်တဲ့ doorbell ပါ
အသစ်ကစမတ်ဗီဒီယိုကိုတံခါးကို ဟလို အသိုက်တစ်ခုရှိပါတယ် HD ကင်မရာ ၁၆၀ ဒီဂရီကျယ်ပြန့်သောမြင်ကွင်းနှင့် HDR စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြောင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောပုံရိပ်အရည်အသွေးကိုရရှိစေသည် ဒါပေမယ့်လည်းတစ် ဦး နှင့်အတူပါရှိသည် နှစ်လမ်းကြားအသံမိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်စပီကာအသံသည်ချောချောမွေ့မွေ့စီးဆင်းစေသည်။
ဒါဟာအစပေါင်းစပ် ဦး ဆောင်လက်စွပ် အိမ်၏တံခါးကိုထွန်းလင်းနှင့်ထို့ကြောင့်သူ၌အဘယ်သူသည်ပိုကောင်းကြည့်ဖို့ရာနှင့်အတူ။
ဗွီဒီယိုဆက်သွယ်မှုအသစ် ဟလို သူတတ်နိုင်တယ် တစ်စုံတစ် ဦး ကတံခါးနားမှာရှိသည်ကိုရှာဖွေပါသင်ခေါင်းလောင်းမြည်ကြပြီမဟုတ်ရင်တောင်အိမ်မှာ။ မှတဆင့်ဆက်သွယ်သည် ဘလူးတုသ်နှင့်ဝိုင်ဖိုင် မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက် application ကိုအသုံးပြု။ နှင့်တံခါးဝ၌နေသော၏ပုံနှင့်အတူပိုင်ရှင်မှအကြောင်းကြားစာပေးပို့သည်။ ထိုကတည်းက, အသုံးပြုသူသည် anywhere ည့်သည်နှင့်မည်သည့်နေရာမှမဆိုဆက်သွယ်မှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်နှင့်ကျွမ်းကျင်စွာ။ သင်၏ visit ည့်သည်ကိုပရိုဂရမ်မာအသံသွင်းပါ။
အကယ်၍ သင်သည် Nest Aware ကိုလစဉ်ကြေးပေးသွင်းရန်ရွေးချယ်ပါကတစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၁၀ ဖြစ်သည် ဟလို နိုင်လိမ့်မည် သင့်အိမ်ထောင်စုဝင်များကိုခွဲခြားသိမြင်ပါကျန်အမှတ်တံဆိပ်၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ဆက်စပ်သော ၂၄/၇ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အခြားအပိုလုပ်ဆောင်ချက်များ။
ယခုအချိန်တွင်တံခါးပေါက်အသစ်၏တန်ဖိုးကိုမသိရှိရသေးပါ ဟလို Nest ကနေငါတို့သိတာကတော့ဖြန့်ချိမယ်ဆိုတာပါ 2018 ၏ပထမသုံးလပတ်ကာလအတွင်းဥရောပနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တည်၏.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နေအိမ် » နေအိမ်အလိုအလျောက် » မင်္ဂလာပါ Nest မှ smart video intercom အသစ်
Oittm ၏ iPhone နှင့် Apple Watch တို့ကိုထောက်ပံ့မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပါသည်
Android အတွက် Twitter Lite သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်